Under Display Cameras (သို့) နံရံနောက်က မျက်လုံးများ - PX
Smartphone Company တွေကတော့ ဒီ UDC တွေကို 2020 အမှီ ဈေးကွက်ထဲပို့နိုင်ဖို့ အပြိုင်ကြိုးစားနေကြပြီ။ (OPPO, Samsung, Xiaomi) OPPO ဆိုရင် သူ့ထုံးစံအတိုင်း ပထမဆုံးဂုဏ်ပုဒ်ကို ယူနိုင်ဖို့ Prototype ပါ ချပြထားပြီ။ ဆိုတော့ နားလည်ရလွယ်သလောက် ဖန်တီးရခက်တဲ့ ဒီ Camera တွေကို ဘယ်အရာတွေကများ ဈေးကွက်ထဲရောက်ဖို့ ကြန့်ကြာနေစေသလဲ???
Xiaomi ကတော့ ၂၀၁၉ နှစ်လည်လောက်ကလည်းက UDC တွေအလုပ်လုပ်ပုံအကြမ်းဖျဉ်းကို Twitter မှာချပြထားတယ်။ သူတို့ပြောပုံအရ Selfie Camera ဟာ Display ရဲ့နောက်ကနေ အလုပ်လုပ်ရမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေကျ Waterdrop, Punch Hole တို့လို Camera တွတုန်းက Glass အနောက်၊ Display နဲ့တစ်တန်းထဲ အလုပ်လုပ်ရတာမို့ အခက်အခဲသိပ်မရှိပေမယ့် အပြင်က အလင်းကို Display Panel ကိုဖြတ်ပြီး Camera ဆီရောက်ဖို့ဆိုရင် ပုံကအတိုင်း Display ရဲ့ Cathode နဲ့ Anode အလွှာတွေက အလင်းဖောက်နိုင်တဲ့အထိ ကြည်လင်ဖို့လိုလာပြီ။
နောက်ပြီး Selfie Camera သုံးမယ့်အချိန်မှာ သူ့ရှေ့ဘက် Display နေရာက LED တွေကို အရင်ပိတ်ခိုင်းရမယ်။ ဒါမှ Display ကထုတ်တဲ့အလင်းက Camera ဆီဝင်မယ့် အပြင်ကအလင်းကို အနှောင့်အယှက်မပေးမှာပါ။
ဒီအချက်တွေကြောင့် UDC သုံးနိုင်ဖို့ဆို Display က OLED ဖြစ်ဖို့ သေချာပေါက် လိုပါလိမ့်မယ်။ နောက်ပြီး RGB ကို အခြေခံပြီး Color တွေကိုပုံဖော်ရမယ့် Display မှာပါတဲ့ အလွှာတိုင်းကို မှန်သားလိုကြည်နေဖို့ဆိုတာ အတော်ခက်တဲ့ကိစ္စပါ။ အခန့်မသင့်ရင် Selfie Camera ရှိမယ့်နေရာတစ်ဝိုက်က Display Quality ကိုပါ ထိခိုက်နိုင်တယ်။ နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ Display Layer ကိုဖြတ်ရတဲ့အလင်းကြောင့် Selfie Camera ရဲ့ Image Quality ဟာ သာမန် Camera တွလောက်မကောင်းတာ၊ ပုံရိပ်ဝေဝါးတာ၊ Color မမှန်တာတွေ ကြုံရနိုင်ပါတယ်။
Samsung ကတော့ UDC အတွက် လိုအပ်တဲ့ Screen နေရာကို သေးနိုင်သမျှသေးအောင် သူတို့ရဲ့ Selfie Camera Size ကို ချုံ့နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ Galaxy Note10 မှာသုံးတဲ့ Selfie Camera ဆို 3mm ထိ သေးလာပြီ။ ဆိုတော့ Company တွေအနေနဲ့ တစ်ဖက်မှာ UDC တွေအတွက်ကြိုးစားရင်း နောက်တစ်ဖက်မှာလည်း Selfie Camea ရဲ့ Image Quality ကို ကောင်းနိုင်သမျှကောင်းအောင် Upgrade လုပ်ရတော့မှာပါ။
ဒီနေရာမှာ မေးခွန်းထုတ်စရာရှိတာက Pop-up Camera, Flip Camera, Dual Display, Punch Hole, Slider တို့လို ပိုပြီးလွယ်ကူမယ့်နည်းလမ်းတွေ ရှိနေရက်နဲ့ Full Screen Display ဖြစ်ဖို့ ဘာကြောင့်များ UDC ကို အသည်းအသန်ကြိုးစားနေကြသလဲ? “လူ့အလို နတ်မလိုက်နိုင်” ဆိုပေမယ့် Company တွေကတော့ နာမည်ရဖို့နဲ့ အမြတ်အစွန်းအတွက် UDC တွေကို 2020 အမှီထုတ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေကြပြီ။
တစ်ခါတစ်လေ User တွေရဲ့အလိုဆန္ဒတွေဟာ Smartphone တွေကို ပိုကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ပဲ ဆွဲတင်ပေးနေသလား၊ ပျက်သုဉ်းမှုတွေဆီပဲ တွန်းပို့နေသလား ဝေမခွဲနိုင် ဖြစ်ရပါတယ်။